ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: အရှုံး
ရှေ့က အရှုံးတွေကို လှေခါးထစ်လို နင်းတက်ပီး အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပါစေကွယ် ..း)))
စာတွေက ရေးသူစိတ်ကို ပြတယ်ဆိုရင် စိတ်ထားနုညံ့သူတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်ရတယ်။
စကားမစပ် မန်ယူက သရေပဲ ကန်ပြီး ချန်ပီယံ ဖြစ်သွားလို့ cheer !!! ပါ။
တယ်..။အရှုံးထဲက အမြတ်ထုတ်ယူနီုင်ရင်ကို ကျေနပ်စရာ။
ဒီတကြိမ် ရှုံးတာဟာ နောက်တကြိမ်မှာ နိုင်ဖို့အတွက် ဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိသားပဲ ညီရာ..၊ အရှုံးကို သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ရင်ပဲ အမြတ်ပေါ့၊
ညီလေး . . . အရှုံးဆိုတာ ကတုံးပဲကွ . . တခါတလေ အမြင်ဆိုးပေမဲ့ . . . ကိုယ့်ကို ပုံစံသစ်တမျိုး ဖြစ်အောင် ပြန်ပုံသွင်းနိင်တဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပဲ . . . လူဆိုတာ အရှုံးကို လေးညို့ ကြိုးလို သဘောထားရတယ် . . . သူ့ကို ကန်နိင်သမျှ ကန်ပြီးထွက်မှ ကိုယ့် အောင်မြင်မှုက မြင့်သထက်မြင့်မယ် . . . .
တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့ နူးညံ့တဲ့ စိတ်ထားလေးမို့ သဘောတကျ ဖြစ်မိတယ်...အရူံးတွေနဲ့တော့ နေသားမကျချင်ပဲ တစ်ခါတစ်လေ ကျနေမိတယ်...ကိုမျိုး..ရေ
ဖေ့ဘွတ်မှာလည်းဖတ်တယ်။ ဒီမှာလည်း ဖတ်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။း)
ရှေ့ကပြောသွားတဲ့ကွန်မန့်တွေကြည့်ပြီး အားတက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အရှုံးနဲ့ခဏခဏ သူငယ်ချင်းလုပ်နေရသူပါ။
အနိုင်နဲ့ အရှုံးဆိုတာ အမြဲဒွန်တွဲနေတာပါ
အရှုံးဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ခါးသီးဖို့ကောင်းပေမဲ့ ချိုမြိန်တဲ့ အနိုင်ရချိန်တွေလည်း ဘ၀မှာ များစွာ ရှိပေလိမ့်ဦးမယ်
ဒီတော့ အနိုင်ဆိုတာကိုလည်း မျှော်လင့်ရင်း အရှုံးတွေကို လှေကားထစ်လုပ်ပြီး တက်ကြစို့ရဲ့
မိုးခါး...ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေဗျာ ။
နေ၀သန်... ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို ။
ကိုမြစ်... အဲ့လိုလေးမြင်ပေးတာကျေးဇူး အစ်ကို မန်ယူကတော့ သတင်းပဲကြားတယ် မကြည့်ဖြစ်တာကြာပြီ ။
ကိုညိမ်းနိုင်... ဟုတ်ကဲ့ အရှုံးထဲက အမြတ် ကောင်းလို်က်တဲ့ စကားလေး ။
ကိုညီ...ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုး) အစ်ကို့ဆုံးမစကားလေးတွေ ညီ နှစ်သက်တယ် ။
ကိုလင်းခေတ်.. ကဗျာဆရာကတော့ လက်သံပြောင်တယ် အရှုံးဆိုတာ ကတုံးတဲ့ ဟဟား မိုက်တယ်ဗျ ။
အိန်ဂျယ်...အရူံးတွေနဲ့တော့ နေသားမကျချင်ပဲ တစ်ခါတစ်လေ ကျနေမိတယ်.. အဲ့စာသားလေး အတွေးတွေ အများကြီးပေးလိုက်တယ် ညီမရေ ။
ရတနာ.... ကဗျာတွေ ရေးတတ်ချင်တယ် ရေးတတ်ဘူးဗျ.
လရိပ်အိမ်...ဒီလိုပါပဲဗျာ တူတူပဲပေါ့ သူက ကျနော်တို့ကို အလစ်ချောင်းနေတာမျိုးလေ ။
မချော... လှေကားထစ်တွေကို နင်းဖြတ်နေတုန်း အစ်မရေ့ တစ်နေ့တော့ပေါ့ နော့် အနိုင်ဆိုတာ ရှိမယ်ထင်တာပဲ ။